Barcelona Oo Dejisay Shan Qorshe Si Ay Uga Soo Kabsadaan Fashilkii & Ceebtii Champions League Ka Soo Gaartay - Gool24.Net
Barcelona Oo Dejisay Shan Qorshe Si Ay Uga Soo Kabsadaan Fashilkii & Ceebtii Champions League Ka Soo Gaartay
May 10, 2019 Saed Balaleti
Madaxda Barcelona ayaa dejisay shan qorshe si ay uga soo kabsadaan fashilkii iyo ceebtii ka soo gaartay Liverpool kulankii lugta labaad ee semi-finalka Champions League ee Anfield.
Sida ay qortay Daily Mail, Barcelona ayaa durbaba ka fekereysa sidii ay isbedel isagu sameyn lahaayeen si koobka Champions League uu dib ugu soo laabto Camp Nou xilli ciyaareedka danbe.
Shanta qodob waxay kala yihiin:
KULA TARTAMAYA CITY IYO UTD SAXIIXA DE LIGT
Barca ayaa ogsoon inay u baahan yihiin inay heleen Gerard Pique cusub inkastoo uu daafaca reer Spain ka riyaaqayay xilli ciyaareed fiican.
Kabtanka Ajax Matthijs de Ligt ayaa loo arkay ninka hogaamin kara daafaca Barcelona, laakiin kooxda reer Spain waxa ay saxiixiisa kula tartameysaa Manchester City iyo Manchester United.
19 jirkaan ayaa hoos u dhigi doona ceceliska da’da ee kooxda iyadoo Barcelona ay haatan heysato todobo ciyaaryahan oo da’dooda ay kor u dhaafeyso 30 sanno.
INAY SOO CELIYAAN XAVI SI UU U BEDELO VALVERDE
Guuldarooyinkii Liverpool iyo Roma sannadkii ugu danbeeyay ayaa su’aal ka keenay shaqada tababare Ernesto Valverde.
Miyuu yahay ninka Barcelona hore u dhaqaajin kara? Madaxda kooxda ayaan hubin taas waxaana ay haatan doonayaa inay dib kooxda ugu soo celiyaan Xavi si uu ugu diyaargaroobo inuu noqdo tababaraha kooxda.
Waxa uu ciyaaraha ka fariisan doonaa sannadkan, Barca ayaana dooneysa inay ka dhigto tababaraha koxoda Barca B si uu u raaco wadadii Pep Guardiola, inuu mar kale khibrad ku yeesho Barca B ka hor inta uusan kooxda koowaad tababare u noqonin.
WAX IIBI SI AAD WAX U IIBSATAA XAGAAGA
Marka la eego xaqiiqda ah in Barca ay lacag badan qarashgareysay labadii sanno ee ugu danbeysay, waxay u baahan yihiin inay ciyaartoy iibiyaan ka hor inta aysan ciyaartoy soo iibsanin xagaaga.
Waxayna heystaan ciyaartoy sida Ivan Rakitic iyo Samuel Umtiti kuwaasoo iibintooda ay kooxda ku heli karto lacag fiican.
Labada ciyaaryahan ayaa qiimo sarre leh gaar ahaan Umtiti oo da’diida ay weli tahay 25 sanno.
INAY XALIYAAN ARINTA COUTINHO
Xiddiga ay Barcelona ka bixisay 142 milyan ginni ayaa ku fashilmay Camp Nou, waxaana labadii kulan ee ugu danbeysay ee fursada la siiyay uu noqday mid aan muuqan.
Si kastaba, in la iibiyo ma ahan wax sahlan sababtoo ah ma jirto koox si dhab ah u rabta waqti xaadirkaan oo diyaar u ah inay bixiso lacagta ay Barcelona ku dooneuso.
Barca ayaa haatan eegeysa suurtogalnimada inay amaah ku diraan xiddigii hore ee Liverpool iyadoo qorshaha danbe uu yahay inay ugu danbeyn iska iibiyaan.
HOWLGALKA LAGU SOO XEROGELINAYO GRIEZMANN
Luis Suarez ayaa ku sii dhawaanaya dhamaadka waayihiisa ciyaareed, waxaana ay Barcelona u baahan tahay xiddig u bedela xiddiga reer Uruguay.
Sidaasi darteed waa caqligal inay ceyrsadaan Antoine Griezmann.
Xiddiga Faransiiska ayaa haatan ku dhow inuu heshiis shan sannadood ah la gaaro Barcelona madaama qandaraaskiisa Atletico Madrid lagu burburin karo 100 milyan ginni marka la gaaro xagaaga.Barcelona Oo Dejisay Shan Qorshe Si Ay Uga Soo Kabsadaan Fashilkii & Ceebtii Champions League Ka Soo Gaartay